CBD MIBVUNZO NEDEDI EMPEROR CBD | CBD YEMAHARA STORE
CBD MIBVUNZO NEDEDI EMPEROR CBD | BEST MHURI SOLUTION IN 2020
CBD ZVOKWADI NEMIBVUNZO NEDRED EMPEROR CBD
Cannabidiol kana CBD inowanzoitika cannabinoid uye chimwe chezvinhu zvakawandisa zvemuti wehemp. CBD yakachengeteka kudya uye haina-psychoactive. Yakagara ichirumbidzwa nekuda kwehunobatsira hutano mhedzisiro pasina mhedzisiro yemishonga yekugara uchinyorerwa.
Une shamwari dzinogara muAmerica uko mbanje dzichiri zvisiri pamutemo here? Usarega shamwari dzako dzichipihwa faindi uye nguva yejeri yekuputa chirimwa, vaudze nezve yedu Delta 8 THC zvigadzirwa izvo zviri mubatanidzwa zviri pamutemo mumatunhu makumi mashanu!
Ko kambani yako yechitatu-bato inoedza zvigadzirwa zvako zvehunhu uye chengetedzo?
Ehe. Red Emperor CBD inodada nekuve nematanho epamusoro maererano nekuchena, simba uye mhando yezvigadzirwa. Red Emperor CBD ndeyechitatu-bato rakaedzwa Cannabinoid Kufaira, Kuuraya zvipembenene, Microbiological Screening, uye Kuongorora kweTerpenes
Ko yako CBD oiri inobva kupi?
Yedu CBD oiri inogadzirwa neyakagadziriswa Organic-zviyero maindasitiri hemp yakasimwa muCalifornia uye iri 100% yemahara yeyakagadzirwa kana ekugadzirwa zvigadzirwa. Hemp mafuta kubva kumaindasitiri hemp parizvino zviri pamutemo kutumira mukati meUnited States.
Zvako Zvigadzirwa zveCBD zvichaita kuti ndinzwe "kukwirira?"
Kwete. Hauzove nekunzwa "kwakakwirira" kana iwe uchidya zvigadzirwa zvemafuta eCBD. Iyo CBD mafuta anoshandiswa muRed Emperor CBD anouya kubva kumaindasitiri hemp zvinomera, nekudaro haizokupe iwe yakafanana yakakwira yeTHC zvigadzirwa.
Zvigadzirwa zvako zveCBD zvichaita kuti ndikundikane bvunzo dzemushonga?
CBD inoonekwa seisingaonekwe mumate kana weti kuongorora. Zvese Mutsvuku Emperor CBD zvigadzirwa zvinobva mumaindasitiri hemp zvirimwa uye zvinoteerana nemitemo inoshanda maererano nezve tetrahydrocannabinol (THC) zvemukati.
Verenga Zvakawanda Pane CBD uye Bvunzo Yezvinodhaka.
Pane here zvakashata mhedzisiro?
Dzvuku Emperor CBD Zvigadzirwa zvakachengeteka, zvisina-psychoactive, uye havana zvakashata zvakashata mhedzisiro.
Chii chinonzi CO2 kutora?
Red Emperor CBD inoshandisa makemikari-emahara CO2 dhizaini inoshandisa yakamanikidzwa kabhoni dhayokisaidhi kudhonza ayo anodikanwa phytochemicals (senge CBD uye mamwe ma cannabinoids) kubva kune chirimwa. Maitiro aya haana chero ane hukasha emakemikari anonyungudutswa ayo anowanzo shandiswa kutora CBD mafuta. Kubvisa kwe CO2 kunogarisana nharaunda uye hakuna chepfu. Kunyangwe ichifungidzirwa senzira inodhura kwazvo yekudyara mbesa munyika, inoonekwa seyakachengeteka.
Ini ndinotora sei CBD uye pamiyero ipi?
Usati wawedzera mafuta eCDD kuhurongwa hwako, sekune chero chinowedzerwa, ita chokwadi chekutarisa nachiremba wako kuti uone kuti chinhu ichi sarudzo yakanaka kwauri. Izvi zvinonyanya kukosha kana iwe uri kutora mishonga yekurwisa-kubatwa. CBD oiri inogona kudyiwa nenzira dzakasiyana siyana: tinctures, capsules, oiri vaping, sublingual, kana nyowani misoro. Paunenge uchitora CBD, gara uchitevera mirairo iri pasuru yechigadzirwa chawatenga.
Ndeupi mutsauko Pakati Pakazara Spectrum, Broad Spectrum, uye Zero THC CBD Zvigadzirwa?
Iwe unopa mutemo wekudzoka here?
Ehe. Kugutsikana kwako chinhu chakanyanya kukoshesa kwatiri, ndosaka odha yako ichitsigirwa ne90-zuva rekudzoserwa mari-kudzoka.
Unogona kutumira zvigadzirwa zveRed Emperor CBD kumatunhu ese?
Tinogona kutumira zvigadzirwa zveRed Emperor CBD kumatunhu ese eUS, kunze kweKansas (KS), Arkansas (AR), neLouisana (LA). Hatina parizvino kutumirwa kwenyika dzese.